"Decis" - प्रयोगको लागि निर्देशनहरू
यो कुनै गोपनीय छैन कि स्वस्थ बिरुवा र सावधान सावधान हेरविचार राम्रो फसलको लागि आधा बाटो हो। यो अझै पनि आवश्यक छ कि आफ्नो बेडहरु लाई खाने को लागि ठूलो संख्या देखि सुरक्षित गर्न को लागी। यो कोट कीटहरूको बारेमा छ जसले पनि "तीरमा" भनिन्छ भन्ने बलियो बिरुवाहरू नष्ट गर्न सक्छ। उनीहरूको विरुद्धमा, प्रभावकारीताको विभिन्न डिग्रीको साथ धेरै औषधिहरू आविष्कार गरिएका छन्, तर तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये डिसेन्स हो।
सम्पर्क-आंतिक क्रियाको कीटनाशक "Decis"
औषधि "डिसेम्बर" बेकार भएको छैन व्यापक लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। पहिलो, यो व्यावहारिक सार्वभौम छ, किनभने यसको मद्दतले यो विभिन्न प्रकारको विकासमा विकासको विभिन्न चरणहरूमा धेरै चिसो र गोर्खाको कीटबाट छुटकारा पाउन, सम्भवतः लार्वेबाट र वयस्क व्यक्तिका साथ समाप्त हुन सक्दछ। यसको अतिरिक्त, डिसेन्स विभिन्न स्टोरेज सुविधाहरूको प्रकृयाका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, सायद, खाली ढाँचामा। दोस्रो, एकदम उच्च स्तरको प्रभावकारितासँगै, औषधीसँग समान स्तरको सुरक्षाको उच्च स्तर छ। यो जनावरहरू जनावर र मानवहरूलाई हानिकारक रूपमा, माटोमा जम्मा गर्दैन, किनकि यसले चाँडो यसको साथ सम्पर्कमा असहमति गर्दछ। निस्सन्देह, यसले गर्भधारण उपायों को आवश्यकता को समाप्त गर्दैन, जस्तै विशेष सुरक्षात्मक कपडे पहनना, हातहरु को पूरी तरिका धोने र उपचार को क्षेत्र देखि जनावरहरु र बच्चाहरुलाई हटाउन। तर शरीरमा विशेष हानिको आकस्मिक सम्पर्कको साथ, "डिसिस" कारण हुनेछैन। औषधि तीन रूपहरुमा उत्पादन गरिएको छ:
2.5% "पात" को ध्यान केंद्रित;
12,5% पायस को ध्यान "Decis extra";
25% पानी-घुलनशील granules "Decis pro" ।
डेनिस कसरी काम गर्छ?
औषधिको तन्त्रणा कीरा को तंत्रिका तंत्र को उल्लंघन मा आधारित छ। शरीर को सतह को माध्यम ले कीट संग संपर्क या उपचार संयंत्र को सतह देखि अंदर को अंदर, "Decis" कोट को तंत्रिका फाइबर को चालक मा अवरोध को परिचय, जो यसलाई असंभव र खाने को लागि असंभव बनािन्छ। "Decis" र एक बलियो पर्याप्त रोकथाम प्रभाव छ, ताकि इलाका संयन्त्रहरूमा त्यहाँ कुनै अण्डा बिछ्याउने छैन।
"Decis" को लागी आवेदन
कीटनाशक लागू गर्न "Decis" निम्न प्रकारका कीटहरू नियन्त्रण गर्न सिफारिस गरिन्छ:
कोलोराडो बीटल ;
स्टकहरूको कीट (टिक्सहरू बाहेक)।
तयारी "Decis" - प्रयोगको लागि निर्देशनहरू
फूल लगाउन अघि फसल र रूखको खेत गर्नु पर्छ, कडा रूपमा खपतको सिफारिस गरिएको दर र समाधानमा औषधि एकाग्रता पालन गर्न। यो उपचार सुचारु, वायुहीन मौसममा मध्यम तापमानमा उत्तम हुन्छ। यो सम्झना हुनुपर्छ कि एक मजबूत गर्मी संग, "Decis" को प्रभावशीलता काफी कम गर्न सक्छन्।
सब्जिहरु निम्नानुसार निर्णय निर्णयसँग व्यवहार गरिन्छ:
मटर, हरियो मटर। 10 लाख / 100 एम र sup2 को प्रवाह को दरमा प्रति 1 लीटर पानीको तयारीको2ग्राम को दरमा समाधान तयार गरिएको छ। उपचारको बढ्दो मौसमको समयमा उपचार गरिन्छ।
गाजर, गोभी। 10 लाख / 100 एम र sup2 को प्रवाह को दरमा प्रति 1 लीटर पानी को तैयारी को3ग्राम को दर मा समाधान तैयार गरिएको छ। उपचारको मौसम बढ्दै गएको छ।
जल खरगोश, खरगोश, टमाटर, तंबाकू र अंगूर। एकाग्रता समाधान5ग्राम प्रति 1 लीटर पानी हो, र 100 मिटर र सुपर2बेडहरूको लागि 10 लिटर आवश्यक पर्दछ। बढ्दो सिजनको समयमा बिरुवाहरू फैलाउन पनि आवश्यक छ।
आलु। कोलोराडो बीटेलको प्रतिरोध गर्न, यो 1 लीटर पानीमा औषधिको2ग्राम पतला र 10 लीटर प्रति 100 एम र सुपर2को फसल स्प्रे गर्न आवश्यक छ।
बगैचामा "Decis" को प्रयोगका लागि निर्देशनहरू
बगैंचामा, दुर्व्यवहारहरू कोटबाट फलको पेटी (सेब, नाशपाती, आशु, चेरी) को रक्षा गर्न प्रयोग गरिन्छ: माथ, भिडन्त, पात रोलर्स, एसिड, आदि। यसको लागि समाधान5ग्राम प्रति लीटर पानीको अनुपातमा तयार छ र प्रति 2-5 लिटर प्रति रूख खरिद गर्दछ।
अनाथुरियम ब्लोसो किन गर्दैन?
गाजर "शरद ऋतुको रानी"
जाडोका लागि रास्पबेरीहरू प्रहार गर्दै
के म पवित्र हप्तामा बगैचा खेती गर्न सक्छु?
जाडोको लागि एक हाइड्रोजन को आवरण कसरी गर्ने?
अजमोद - रोपण र हेरविचार
जाडोका लागि आँशु भण्डारण कसरी गर्ने?
कसरी घरमा पखाल भण्डारण गर्ने?
मितिहरू कसरी बढ्छ?
रास्पबेरी: रोपण र हेरविचार
टमाटरको बिरुवालाई कसरी खुवाउनु हुन्छ ताकि तिनीहरू पक्कै हो?
मोडुलर बेडरूम फर्नीचर - इन्टरनेटको कार्यक्षमताको रहस्य
लीक - खेती
पुरुषहरूमा लक्षण - लक्षणहरू
स्नानको लागि टाइल
सबैभन्दा ठूलो संगठन - ओस्कर-2016
गर्मीको लागि मातृत्वको कपडा
आटा मा सेब, ओवन - नुस्खा मा पकाइएको
जॉन ट्रेल्ल्टा पहिले लाल परिवार को सबै परिवार संग लाल कालीन मा आए
32 "मर्ममस" तपाईंको आधुनिक बालिका पुस्तकको पानाहरूमा पर्खिरहेको छ!
बाल्डविन आइल्याण्ड कपहरू राम्रो स्वादको सामना गर्छन्
बच्चाहरु को असबाब वाला फर्नीचर
भित्तामा साटन कपडा
3 डी ज्वाला प्रभावको साथ बिजुली चिमनी
अलमारियाँ को लागि फर्नीचर मोर्चा
Keira Knightley गर्भवती छ
कालो स्वेटर - केटीहरुको लागि सबैभन्दा फैशनेबल मोडेल
मशरूमसँग मासु रोल